ကိုကင်းထုတ်ယူမှုက corticotropin-releasing factor အားဖြင့် CRG, NMDA receptors နှင့် PKA (2006) မှတစ်ဆင့် amygdala glutamatergic synapses တွင်ဖြစ်ပေါ်စေသောရေရှည်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည် - Your Brain On Porn
EUR J ကို neuroscience ။ 2006 Sep;24(6):1733-43.
Pollandt S က1, လျူ J ကို, Orozco-Cabal L ကို, Grigoriadis DE, ခြိုငျ့ WW, Gallagher JP, Shinnick-Gallagher P ကို.
ကိုကင်းစွဲခြင်းသည်ကြာရှည်ခံခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သည်။ သက်သေအထောက်အထားများအရကြာရှည်ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် 'စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သော' အပြုအမူနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများသည် corticotropin-releasing factor (CRF) ၏ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (CeA)၊ ကော့ဒ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် limbic circuitry ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှကမကထပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည် လှုံ့ဆော်မှု - ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဂီယာ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကြွက် / လူ့ CRF အားဖြင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် amygdala (LA) -to-CeA synapses မှာသွေးဆောင် glutamatergic ဂီယာ၏ရှည်လျားသော - ရေရှည်အလားအလာဖော်ပြရန်။ ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းထိတွေ့မှုကနေဆုတ်ခွာ၏2ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက် CRF-သွေးဆောင်ရေရှည်အလားအလာ (LTP) သည်အလွန်တိုတောင်းသောကာလဆုတ်ခွာပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာဆားထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအနေဖြင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုခဲ့သည် (24 ဇ), နှစ်ခုကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်နာတာရှည်ကင်းထံမှအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRF စနစ်များမြားတှငျပွောငျးလဲညွှန်ပြရှိ၏။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် CRF-သွေးဆောင် LTP saline- နှင့်ကိုကင်း-ကုသနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်ပရိုတိန်း kinase ကို C မှတဆင့် CaV2 (R-type အမျိုးအစား) ကယ်လ်စီယမ်လိုင်းများနှင့် intracellular အချက်ပြ, CRF2.3 ၏ activation အပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုးမြှင့် CRF-သွေးဆောင် LTP ဆုတ်ခွာ၏2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်တစ်ခုပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးကတဆင့်ပြတိုးမြှင့်ခြင်း, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors လိုအပ်သောနှင့်ဆက်စပ်, လုပ်ခဲ့ပြီး CRF1 အဲဒီ receptor function ကိုမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Single-ဆဲလ်အသံသွင်းသည့်ကိုကင်းကုသမှုအနေဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်သိသိသာသာတိုးလာ NMDA / AMPA အချိုးဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤရလဒ်သည်နာတာရှည်ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ကုသမှုရွေးချယ်စရာအဖြစ် CRF1 အဲဒီ receptor ရန်များအတွက်အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့များနှင့် CRF စနစ်များဆေးဝါးမော်ဂျူများအတွက်အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ် Ca (V) 2.3 blockers အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2006.05049.x